"Kuningi ifenisha" - inhlangano izimboni eziningana esikhiqiza ifenisha ( "iNkosi SOFAS", Evrosofa, Lux ikhaya Interiors, Modool, Trend, Infinity, Reform) netindlela (Steelman), futhi inethiwekhi ifenisha ezitolo. "Radu okukhethayo! Radu amanani!" - lena Isiqubulo sabo. Futhi eqinisweni kunjalo Ukukhetha namanani imikhiqizo "Kuningi ifenisha"? Izibuyekezo Customer sihlaziye kulesi sihloko.
Uma benginguwe ikhanda lika inkampani, benginga neze ngalendoda ukuhlolwa ekhishwe kumakhasimende: 2.1 amaphuzu aphume a kungenzeka 5. Ngokusobala, akabanga kahle ukuba inyunyana izimboni "Kuningi ifenisha". Umthengi izibuyekezo zama-ingxenye kakhulu ezimbi, nakuba kukhona okuhle.
Plus abathengi inkampani bakholwe Ukukhetha enkulu ifenisha enhle ngamanani ezingabizi kakhulu. Ngempela, kukhona okuthile ukubona e ezidayiswa "Kuningi ifenisha". Izibuyekezo Customer bathi kule esitolo sefenisha Uthole kusofa noma udonga usayizi ezifanele kanye nomklamo. Abantu abafana izisebenzi nenhlonipho letinemakhono nokucwala "Kuningi ifenisha". Umthengi omenyiwe sebuningini onobuhle ekhoneni SOFAS usayizi enkulu (3 * m 2) kanye okujwayelekile (2 * 0.9 m), imibhede, izindonga, amatafula amakhabethe. Ukuze udumo abakhiqizi "Kuningi ifenisha", ikhathalogu ihlanganiswe kahle, kanye yonke into icacile: yini usayizi ukukhetha ifenisha, onjani izimpahla ezisetshenziselwa zokukhiqiza zawo futhi zihluke kanjani kubiza kakhulu. Lokho yisiqubulo yakhe "Kuningi ifenisha" akashintshi. Nakuba-ke owenza kwenzeke: amanani aphansi ombukiso kuphela gumbi, kodwa uma umthengi uyofuna unempahla nge nempahla ezithambile kanye nezinye izici, lesi sibalo ukwanda kakhulu. Ngaphezu leli nani akubandakanyi izindleko ukulethwa nasemhlanganweni. Konke lokhu umthengi ukhokha owengeziwe. Lokho kusho ukuthi lezi tags intengo nokucwala "Kuningi ifenisha" amanani musa ngempela kungahambisani ngokoqobo.
Manje ngenxa nebubi ...
Esikhathini ifenisha ezitolo hang nezibonakaliso amasampula, ukhuluma ngani ukulethwa zingakapheli izinsuku 2 izimpahla othengwe kusukela salon "Kuningi ifenisha". Izibuyekezo futhi ubuyophazamiseka abathengi ziyethusa ememeza ethi zokukhokha engamiswanga izinkontileka (14 kuya ku-30 izinsuku), njalo i-. Kungasebenti kahle kwaletinye Logistics - hhayi kuphela lokususa ifenisha ka kule nethiwekhi. Kukhona izikhalazo mayelana nabathengisi ukuzibhala. Iningi uthi abathengi ikhwalithi yomkhiqizo "Kuningi ifenisha". Izibuyekezo uthi owenza SOFAS hhayi ezishibhile ngemuva kwezinyanga 2-3 wokusebenza ube engenamsebenzi. Kukhona okudayiswayo imikhiqizo etholakala futhi emshadweni sobala: esigwegwile upholstered kokuqeda imikhiqizo impahla kanye bensimbi kabi ithungwe, emashalofini ukuze amakhabethe, kungahlali. Ngokuvamile ocelwe ikhathalogu ifenisha ngempela lowehlukile ngokuphelele kuka kukhonjisiwe esithombeni. Yini nomkhiqizi ubiza "Faux" ishibhile Umbala Izinketho, abe nephunga sethusa futhi creases phezulu.
Yiqiniso, abantu bangempela kukhona subjective kakhulu, futhi kuxhomeke kakhulu izisebenzi ifenisha ezidayiswa. Lapha-ke kunjengokukhanya ubani lucky: kwelinye esitolo akhethiwe iqembu elikhulu ochwepheshe, futhi enye inkinga abasebenzi. Konke isihlobo. Ukuze sikhethe kahle, izinketho kufuze uzihlole.
CSS, mbumbulu, mbumbulu: lokuhambisa phezulu, ingane, target